इनडोर र आउटडोर प्रयोगको लागि डिजिटल एलईडी भिडियो भित्ताको उत्पादन प्रक्रिया. - इनडोर आउटडोर नेतृत्व भिडियो प्रदर्शन स्क्रीन निर्माता
इनडोर र आउटडोर प्रयोगको लागि डिजिटल एलईडी भिडियो भित्ताको उत्पादन प्रक्रिया.
इनडोर आउटडोर P1.25 P1.5 P1.8 P1.9 P2 P2.5 P2.9 P2.9 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6 P8 P10 को उत्पादन जान्न चाहनुहुन्छ??
एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिन उत्पादनको प्राविधिक प्रक्रियाको विस्तृत विवरण
. LED इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन टेक्नोलोजी:
1) सफा गर्दै: अल्ट्रासोनिक सफाई PCB वा LED कोष्ठक चयन गर्नुहोस्, र सुक्खा.
2) एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन माउन्ट गर्दै: चांदी गोंद एलईडी मर्ने को तल इलेक्ट्रोड मा तयार छ पछि (ठूलो वेफर), विस्तारित ट्यूब कोर (ठूलो वेफर) स्पिन्डल्स टेबलमा स्थापना गरिएको छ. माइक्रोस्कोप मुनि, डाइ पीसीबी वा एलईडी कोष्ठको सम्बन्धित प्याडमा एक एक गरी स्थापना गरियो, र त्यसपछि चांदी ग्लूई.33ठोस गर्न sintered) एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन दबाव वेल्डिंग: इलेक्ट्रोडलाई हालको लेखनका लागि एलईडी ट्यूब कोरमा जडान गर्न एल्युमिनियम तार वा सुनको तार वेल्डिंग मेशिन प्रयोग गरिन्छ. पीसीबीमा सीधा स्थापित, सामान्यतया एल्युमिनियम तार वेल्डिंग मेशिन छनौट गर्नुहोस्. (उत्पादन सेतो शीर्ष-नेतृत्वमा सुनको तार वेल्डरको चाहिन्छ)
4) LED इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन प्याकेज: वितरण पछि, LED डाई र वेल्डिंग तार इपोक्सी राल द्वारा राखिन्छ. पीसीबी बोर्ड वितरणमा, त्यहाँ उपचार पछि जेल आकार को लागी कडा आवश्यकताहरु छन्, जुन सीधा ब्याकलाईट उत्पादनहरूको चमकसँग सम्बन्धित छ. यस प्रक्रियाले पनि फस्फोरको मिशन लिनेछ (सेतो एलईडी).
5) एलईडी भिडियो स्क्रीन वेल्डिंग: यदि ब्याकलाईट smd- नेतृत्वमा वा अन्य प्याकेज गरिएको नेतृत्वमा छ, टेक्नोलोजी स्थापना गर्नु अघि यसलाई पीसीबीको नेतृत्वमा वेल्ड गर्न आवश्यक छ.
6 एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन काट्ने फिल्म: पञ्च डाइ काट्ने ब्याकलाइट प्रयोग गरी विभिन्न प्रसार फिल्मद्वारा आवश्यक छ, चिंतनशील फिल्म, आदि.
7) एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन स्थापना: रेखाचित्र अनुरोध अनुसार, ब्याकलाईट स्रोतको बिभिन्न सामग्री र प्रविधि सही स्थितिमा स्थापना गर्नु पर्छ.
8) एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन परीक्षण: ब्याकलाईट र प्रकाश एकरूपताको फोटोइलेक्ट्रिक प्यारामिटरहरू उल्लेखनीय छन् कि छैनन् जाँच गर्नुहोस्.
9 एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन प्याकेजि।: अनुरोध अनुसार प्याकेजि and र गोदाम उत्पादनहरू.
इनडोर आउटडोर LED डिजिटल भिडियो नेतृत्व स्क्रीन चमक र दृश्य कोण
नेतृत्व प्रदर्शन स्क्रीन भिडियो भित्ताहरूको उत्पादन प्रक्रिया